Warqaddii Abraham Lincoln u diray macallinka wiilkiisa - NETBEINS
:Warqaddii Abraham Lincoln u diray macallinka wiilkiisa
Abraham Lincoln Madaxweynihii 16-aad ee soo mara Mareykanka, ahna nin ka ku sawiran lacagta 5 ta doollar ah, ayaa warqaddaan u qoray macallin ka wiilkiisa, sidaan ayeyna ku billaabaneysaa:- Wiilkeygu maanta ayuu billaabaya iskuulka, waxkastana qariib ayey ku noqon doonaan in muddo ah, waxaan kaa rajeynayaa inaad si akhyaarnimo leh ula dhaqmi doonto. Waa safar […]
By admin July 18, 2019, 4:40 AM
Abraham Lincoln Madaxweynihii 16-aad ee soo mara Mareykanka, ahna nin ka ku sawiran lacagta 5 ta doollar ah, ayaa warqaddaan u qoray macallin ka wiilkiisa, sidaan ayeyna ku billaabaneysaa:-
Wiilkeygu maanta ayuu billaabaya iskuulka, waxkastana qariib ayey ku noqon doonaan in muddo ah, waxaan kaa rajeynayaa inaad si akhyaarnimo leh ula dhaqmi doonto. Waa safar gayn kara qaarad ka qaarad, uuna ka heli karo waayo aragnimooyin ay ka mid noqon karaan colaad, masiibo iyo murugo. In Nolosha noocaas ah lagu noolaadana waxay u baahan tahay iimaan, jacayl iyo dhiiraanaan.
Sidaas darteed macallin gacantiisa qabo, oo bar waxey tahay inuu ogaado, laakin si akhyaarnimo leh, haddaad awooddo. Bar in kastoo cadaw jiro in saaxib jiro. Waa inuu ogaada inuusan nin kasta rag ahayn, ee bar si kastoo dadku u xunyahay in haddana geesi ku jiro, si kastoo uu u jiro siyaasi qalloocanna, u sheeg inuu ku jiro hoggaamiye heegan ah.
Bar iney 10 sent oo aad shaqeysataa ka qiima badan tahay doollar jidka laga helay. Xusuusi in iskuulka lagu dhacaa iney ka sharaf badantahay in macallimiinta la qisho. Waxaad bartaa sida guuldarrada loo mahadiyo, guushana loogu raaxeysto markey timaado.
Bar u damqashada kuwa jilicsan iyo u adkaan shaha kuwa ay tahay in adayg lagu wajaho.
Ka duw xaasidnimada, oo bar xasiloonida iyo dhoolla cadeynta. Fadlan bar haddaad awooddo sida loo qoslo markey murugi jirto, una sheeg inaan ilmadu ceeb ahayn. Waxaad bartaa iney ammaan leedahay guuldarradu, haddaan guusha laga quusan.
Bar yaabka ay buuggaagtu leeyihiin, haddana waqti u sii inuu arko mucjisaadka shimbiraha cirka duulaya, shinida qoraxda joogta iyo ubaxa ka baxaya buuraha cagaaran. Bar inuu aamino fikradihiisa, xitaa haddii cid kasta kasoo horjeesato, kuna tiraahdo waad qaldan tahay.
Wiilkeyga awood usii inaanu noqon hayi raac, xitaa haddii dad koo dhani dhinac isku raacaan.
Bar in la dhageysto qof kasta, laakin sidoo kale bar sida la isaga shaandheeyo, wax kasta oo uu maqlo, kana qaato wixii naftiisa anfaca, wanaagna ugu jiro.
Bar inuu ku sarifto hibadiisa iyo maskaxdiisa qiimaha ugu sareeya, laakiin aanuu gorgortan ka galin damiirkiisa iyo shaqsiyadiisa. U ogolow inuu ku dhiirado dulqaad yari, una ogolow inuu u dulqaato geesinimada. Bar inuu ku qurxiyo naftiisa iimaan, maxaa yeelay aaminaada ilaahay baa qurxinaysa dadka kale.
Turjumay: Maxamed Axmed Cali
Khaliil kii Gaalka ahaa Q-2aad